China DZ600 / 2S milina famenoana banga mandeha ho azy mpanamboatra sy mpamatsy |INCHOI
Ity maodely ity dia vokatra manara-penitra an'ny orinasa, vita amin'ny vy tsy misy pentina rehetra, mahatohitra ny tontolo henjana, fampiasana tsy tapaka ary maharitra.Io no modely an-trano lehibe indrindra amin'izao fotoana izao.Izy io dia mety amin'ny hena, vokatra voatavo, vokatra anaty rano, hazan-dranomasina, legioma, ary vokatra fambolena, voankazo voatahiry, voamadinika, vokatra soja, akora fanafody, fitaovana elektrika, sns.
Vacuum fonosana dia ny handroaka ny banga fonosana kitapo, ary avy eo dia asio tombo-kase izany mba hamorona ambaratonga sasany ny banga ao amin'ny kitapo, ka ny entana fonosana dia afaka hahatratra ny tanjon'ny oksizenina insulation, freshness, hamandoana, bobongolo, harafesina, bibikely, ary ny loto. fisorohana.Hanitatra tsara ny andro fitehirizana azy ary hanamora ny fitahirizana sy ny fitaterana.
Ity andiana milina famonosana banga ity dia aseho amin'ny alàlan'ny dingan'ny fanodinana mandeha ho azy, famehezana, fampangatsiahana ary setroka, izay ampiasaina amin'ny fonosana banga ho an'ny sakafo, pharmaceutika, rano, simika ary elektronika. ary koa ny harafesina sy ny hamandoana, mitazona ny kalitao sy ny havaozin'ny vokatra mandritra ny fotoana fitehirizana maharitra.manana fahaiza-manao avo sy mora ampiasaina, fitaovana tena ilaina amin'ny tsipika fanodinana sakafo sy orinasa hafa.
Ny milina famonosana banga novokarin'ny orinasanay dia manana ny fiasan'ny fonosana banga, mety amin'ny kitapo sarimihetsika plastika isan-karazany na kitapo sarimihetsika vita amin'ny aluminium foil, ho an'ny akoho natono, gana, hen'omby sy henan'omby, hena boriky, saosisy, ham ary vokatra hena hafa. ary vokatra anaty rano., Ny vokatra pickles, ny vokatra soja, ny additives isan-karazany, ny masirasira, ny sakafo, ny voankazo voatahiry, ny voa, ny fanafody, ny dite, ny metaly tsy fahita firy, ny vokatra simika, sns.
Vacuum fonosana milina, mila manindry fotsiny ny banga fonony tanteraka aorian'ny banga, famehezana, mangatsiaka sy ny setroka eo amin'ny dingana.
Ny fonosana banga na entona vacuum dia afaka misoroka ny oxidation, ny bobongolo ary ny bibikely mihinana moth, mando, fotoana fitehirizana vokatra.
Model No. DZ600/2S
Fanjifana herinaratra antonony 2,2kw
Haben'ny efitra banga 700*610*130mm
Famehezana habe mahomby 600*10mm/2 sekely
Laharana fanafanana 2*2
Hafainganam-pamokarana 120-200 heny/ora
Ny elanelan'ny tsipika famehezana 490mm
pump down ny fotoana 1~99s
Fotoana famehezana hafanana 0~9.9s
diplaoma vacuum ≤200pa
indrindra ny configuration
TSIA. Anarana ara-nofo Marika fanamarihana
1 ambony efitra 4mm SUS304 INCHOI hery avo, azo itokisana
2 ambany sehatra miasa 4mmSUS304 INCHOI fivoriambe weld
3 takelaka aoriana SUS304 INCHOI
4 vatana fototra SUS304 INCHOI
5 axe principale SUS304 INCHOI
6 tsorakazo mampifandray famolavolana SUS304 INCHOI
7 mitondra faladia famolavolana SUS304 INCHOI
TSIA. Anarana habetsahana marika fanamarihana
1 paompy banga 2 NAN TONG 20m³/h
2 mpanova 2 XINYUAN
3 contactor 2 CHNT
4 Thermal overload mpiaro 1 CHNT
5 fampitana fotoana 3 CHNT
teo aloha: DZ600/2S mitongilana Adjustable Vacuum fonosana milina
Manaraka: DZ-1000 milina famonosana banga mitohy
milina famonosana banga tsara indrindra
Milina famonosana vacuum sakafo ara-barotra
Fonosana rivo-piainana miovaova mitohy mandeha ho azy...